I-FAQ | Bomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, uViolet, iGreen Laser Pointer | I-Laser - TorLaser.com
-Yini i-Laser Pointer?
A i-laser pointer yidivayisi encane ekhipha ukukhanya kwe-laser, imvamisa eluhlaza okotshani noma obomvu, okuvame ukusetshenziselwa ukukhombisa iphuzu noma indawo ethile.
Ngeminye imininingwane hlola Isichazamazwi se-Laser.
The ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwama-laser izikhombisi kuyajabulisa, ukubhula ngezinkanyezi, izithombe, izivivinyo, izethulo, ukubukwa okubukwayo, ukukhwela izintaba, ukuzingela, i-airsoft, izimpawu ... kepha ekugcineni noma ngubani ongaba wusizo kuwe.
Zonke izikhombisi zethu ze-laser eziqeqeshiwe yiClass 3B noma i-4, kanjalo ziyingozi kakhulu uma zingasetshenziswa ngaphansi kwezindlela ezifanele zokuphepha.
Okudala i-laser kube yingozi amandla ayo amakhulu okuqoqelwa kokukhanya endaweni encane kakhulu futhi enamandla, ngaphezu kokuhlukahluka kokukhanya, okungukuthi, ugongolo lubunjiwe, ukukhanya akukaze kusatshalaliswe njengoba kungenzeka amamitha ambalwa kusukela ngethoshi, okuholela ekutheni kube yingozi kokubili iDemo kude.
Umonakalo odalwe ukusetshenziswa okubi kubi ukushiswa kwamehlo okuvame kakhulu ngokuchayeka ngokuqondile noma ngokungaqondile kukhonkwane lokukhanya njengoba ukukhanya okukhombisa ngokwako kuyingozi kakhulu futhi kungalawuleki. Umonakalo onjalo awunakulungiswa ngombono ngakho-ke kuyalwa njalo ukuthi usebenzise lolu hlobo lwamagobela okuvikela laser agunyazwe i-wavelength namandla asetshenzisiwe.
Kepha phumula, ngoba akudingeki ubesabe noma uyeke ukuzisebenzisa, kwenze ngenhlonipho futhi unikezwe izindlela ezifanele zokuphepha zokusetshenziswa okuphephile:
Sebenzisa njalo izindlela zokuphepha ezivunyiwe ukuvimbela ukulimala kombono.
· Ungalokothi ukhombe ugongolo lwe-laser ngqo emehlweni, noma izibuko zokuphepha zingaba yingozi kakhulu lokhu.
· Ungalokothi ukhombe okuphilayo, okuvuthayo noma ukwenza ukusetshenziswa kungabi nesibopho.
· Qaphela ukukhanya okukhanyayo kogongolo lwe-laser ngenxa yokugoqa izindawo ezibonakalayo ezinjengezibuko noma izindonga ngokwazo. Ngalesi sizathu, ngaso sonke isikhathi kufanele usebenzise ingaphandle elilawulwa ukwehluleka kwezinto eziseduze ezingathinta ugongolo. Naka kakhulu leli phuzu lapho wenza izivivinyo ebangeni eliseduze njengokuzama ukushisa izinto njengoba uzoba seduze kakhulu nemishayo ebonisiwe.
· Ama-laser akuzona amathoyizi, ungawasebenzisi kanjalo.
· Musa ukuguqula noma ukukhohlisa ukusebenza okujwayelekile noma izingxenye ze-laser.
· Iningi lezinkomba zethu ze-laser ziyakwazi ukushisa isikhumba ngaphezu kwamehlo, libukeze izici zalo futhi lithathe izindlela ezifanele zokuphepha ukugwema ukuthintana nogongolo.
Ungakhokhi noma uvumele ukusebenzisa i-laser yakho kubantu besithathu abangazisiswanga kahle ngakho konke lokhu ukuphepha nokusebenzisa okufanele.
Ukugcwalisa le mihlahlandlela elula, umqondo ojwayelekile, usazokujabulela ukuhlupheka noma ubungozi bezikhombisi ze-laser!
Uma bezomthetho eSpain kubahwebi abangochwepheshe abangaphezu kweminyaka eyi-18 nangokuqeqeshwa okufanele. Lokhu akusho ukuthi amaphoyisa angeke akwazi ukukususa kuye uma umsebenzisa kabi angabahlawulisa nokuboshwa. Ngiyacela, ngenxa yawo wonke umuntu onesibopho sokusebenzisa futhi uhloniphe imithetho yezwe lapho ukhona. Uma udinga ulwazi olwengeziwe ngobukhona bocwaningo lwamanje ngaphambi kokwenza ubugebengu.
Ukuthola ukuthi iyiphi i-laser elungele wena, okokuqala zibuze ukuthi hlobo luni lokusetshenziswa ocabanga ukuthi ulunikeza nokuthi ucabanga ukuthi uzosebenzisa kangaki: ngezikhathi ezithile, njalo, njalo, ...
Lapho usunomqondo osobala, into yokuqala ukukhetha umbala we-laser, ngokuya ngezinhlelo zokusebenza kunconyelwe umbala owodwa noma omunye:
-Signaling kanye ezibukwayo ezibukwayo: umbala oluhlaza uqhakazile esweni lomuntu, okwenza kube kuhle ukuthi lusetshenziswe ekusetshenzisweni kwezinkanyezi, ukuthwebula izithombe zasebusuku ... Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka nawo ukhanya kakhulu futhi uyakhangiswa ngemibukiso, futhi obomvu nohlaza okwesibhakabhaka bekungaba okufanelekile ukusetshenziswa ezindlini nezethulo kunzima ukubona. kanye nemibala ecasulayo.
-Experimentación and Burn: kokuhlolwa kokushiswa, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ungcono kakhulu, ngoba amandla abo amakhulu kakhulu ukusondela emaphethelweni e-ultraviolet (UV). Abalandeli be-violet laser futhi bomvu, ukuvutha kakhulu futhi.Kulokhu i-laser eluhlaza ithatha indawo yokugcina ukuba ingabi namandla njengabanye ukusha.
Ngemuva kokuba nombala ocacile okulandelayo kungaba amandla. Uma ufuna i-laser eqhubekayo yokusebenzisa uzama ukukhetha amandla aphezulu isikhathi eside ngangokunokwenzeka ngohlobo lohlelo lokusebenza oluzosebenzisa, njengoba lunamandla kunawo wonke, nokukhanya okuningi kakhulu, ama-lasers aqine, ahlala isikhathi eside futhi ahlala isikhathi eside.
Ukuze ukwazi ekugcineni ukuthi yini laser yakho enhle yokubonisana izici zokuqhathanisa, uzothola ewusizo. Futhi njengenjwayelo, ungakhohlwa ukuthi sikhona kuwe ukulahlwa ukululeka futhi uphendule yonke imibuzo yakho.
-Kungani eminye imibala ibiza kakhulu kuneminye?
Iningi lamakhasimende ethu lisibuza ukuthi lingabiza kanjani I-TorLaser 2000mW Blue BlueTor ukuthi I-GreenTor, eluhlaza kanye ne-500mW.
Impendulo ilula, umehluko wentengo phakathi kwemibala ehlukene kungenxa yohlobo lokwakhiwa kwangaphakathi nobuchwepheshe obusetshenzisiwe ukufeza a wavelength noma enye.
Ama-laser aluhlaza angama-laser we-infrared ngempela (808nm), kepha ngokwakhiwa kwawo kwangaphakathi ngamakhristali angenamqondo, ukuguqulwa kutholakala ngombala oluhlaza okotshani no-532nm. Le nqubo ibiza kakhulu futhi kunzima ukuthola amandla amaningi alahleka ngesikhathi sokuguqulwa. Ngakho-ke empeleni, i-laser diode ingu-2000mW GreenTor, kuphela ngemuva kokuguqulwa kombala nesihlungi se-IR, ukuphuma kwamandla kwangempela okuzuziwe okuluhlaza (532nm) ngu-500mW ka-2000. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi intengo yakhe ingahle ibonakale ibiza ngokuqhathaniswa neblue, yize njengoba uzogcina ungaqondi ukuthi, kuyintengo efanelekile.
Ngokuphikisana nama-lasers aluhlaza okwesibhakabhaka, i-violet noma ebomvu, umphumela uqondile, ngaphandle kokuguqulwa noma ukuhlunga, ngakho-ke ukwehlisa izindleko zawo zokukhiqiza ngokungazidingi izinto ezinjalo zangaphakathi nokunikeza okuphuma kwamandla kukhulu kakhulu kunemifino enani lesikali esifanayo.
Le nto ayisiyinhle kangako noma yimbi kakhulu kwi-laser noma kwabanye, kuyinto engafani naluhlaza okotshani, yize ama-milliwatts amancane anikeza ukukhanya okwengeziwe, ukuze okungaphezu kokukhokhela izindleko ezingezekile.
-Kungani kwenye indawo izikhombisi ze-laser zishibhile futhi “zinamandla” kuneTorLaser?
I-TorLaser iziqinisekiso inani elihle kakhulu kuyo yonke imikhiqizo yabo, akekho umuntu ozokunikeza amandla afanayo, ikhwalithi kanye nensizakalo ngentengo ephansi futhi uma wenza, usazise futhi ushaya inani.
Lokho kusho, uma uthola inani eliphansi ku-laser yezici ezifanayo i-TorLaser, noma i-milliwatt laser kakhulu ngemali encane kakhulu kuneyethu, ngokuqinisekile i-laser ingamanga.
Uyamangala kungaba kanjani i-laser yamanga?
Lawa amasu aphambili wokukhohlisa okuvame ukusebenzisa iningi labanye ababonisi bezimpawu ze-laser:
-Okukhipha kungamanga noma okhohlisiwe: amalebula wokuhlonza angama-laser mbumbulu ngqo asuka kumafektri awakhiqizayo, noma aguqulwe ngabathengisi bezinikezeli ukuze kufinyelelwe inzuzo ephakeme ngenzuzo yokuthenga abathengi. Ukusatshalaliswa kwamandla angenangqondo ezinkulungwane milliwatts, ngoba angamanga ngokuphelele futhi futhi amanani aphansi kakhulu, awekho ama-30-50 € wamahhala futhi awukaze ube ne-laser 500mW eluhlaza ngokwesibonelo, ngoba leyo mali noma kungenzeka ukukhokha inani lentengo ye-laser diode lawo mandla angempela, futhi ungaze unake ezinye izingxenye, umhlangano, ukusatshalaliswa, intela, i-margin yenzuzo ... Akunakwenzeka kunoma yikuphi.
-Filter IR: izikhombisi ze-laser eziluhlaza iTorLaser inesakhi sangaphakathi esibizwa Isihlungi se-IR, obhekele ukuhlunga ukukhanya okukhishwayo kususwe noma iyiphi ingxenye yentsalela yesibani se-infrared futhi iqinisekise ukuthi amandla okukhipha angu-100% akhishwe ngobude obonakalayo. Lokhu ngomunye umehluko omkhulu owenza isikhombisi seTorLaser singamandla alinganayo noma amancane kakhulu, aqhakaze ne-podereso abanye bekhwalithi engathandeki njengoba ngokujwayelekile angalokothi afake lesi sakhi ngaphezu kokulondolozwa kwezindleko, ukuze enze amandla amakhulu ngokuya izinto ezivuthayo, njengoba uzovunyelwa ukuthi udlule amandla ayi-100% akhiqizwa kufaka phakathi ingxenye ye-infrared, noma ingabonakali, uma inamandla kakhulu ekushiseni, ngenkathi iyingozi futhi inganconywa. Ngakho-ke, kulula ukuthola izinkomba zokuwehlisa amanani entengo empeleni ziyakwazi ukushisa izinto ezihlukile, inkinga ukuthi uthengisa i-laser eluhlaza eyi-100%, ungaboni ukuthi okuluhlaza kungu-25%, 75% onobungozi obuhambisana nobuso, ngabe unayo dinga ukucaca nokuthenga, futhi ikakhulukazi ungathandi ukungcola ngokubuka kwakho.
-Izici: labo abamenyezelwe yilaba bathengisi bahluke kakhulu kwi-laser yangempela oqinisekile ukuthi uyithumela. Imvamisa basebenzise ubukhulu be-luminiso beam, baqiniseke ukuthi uzofinyelela amashumi amakhilomitha uma kungenjalo.Futhi awusoze ubonise i-laser esetshenziswa ezithombeni zangempela noma kuvidiyo ukuze ubone umphumela onikezwe.
-Imininingwane: izesekeli zekhwalithi zezici ze-laser zibaluleke kakhulu ukuthola imiphumela emihle futhi zingasetshenziswa ngokuphepha. Amabhethri ahlinzekwa amandla kulezi zama-lasers nawo ayimikhiqizo yokukhohlisa. Yize la mabhethri womgunyathi ebukeka efana ngaphandle, amakhemikhali awo awekho sezingeni elibi kakhulu, awusoze waba namandla okufaka uphawu kwilebula ngemuva kwemijikelezo yokushaja eminingana ebangela leli khono. Futhi abanalo uhlelo lokuvikela lwangaphakathi olubhekene nokujikeleza okufushane, ngakho-ke luyingozi kakhulu ngoba lungadala umlilo ngesikhathi sokushaja. Kufanele futhi sinake kakhulu izibuko uma zihlinzekwa ngala ma-lasers, kungenzeka ukuthi azemukelwa noma zidlulile izilawuli zekhwalithi ezidingekayo, nokusebenzisa kwayo okuyingozi kakhulu.
-Shipping: eziningi zalezi zitolo nabathengisi abesebenzisa ukuthunyelwa kwamanye amazwe kusuka kwamanye amazwe ukunciphisa izindleko. Ungavumi ukuthi ulinde inyanga noma ngaphezulu ngokuthenga kwakho, kuyabekezeleleka ukuthi lapho usuvele ukhokhile kufanele ulinde isikhathi eside kangako. Ngaphandle kwalaba bathengisi abangakaze baxoxe ngokukhokhiswa okungaphezulu okungenzeka kufakwe uma iphakethe lakho kungenzeka limiswe emasikweni, izinqubo kuzofanele zenziwe ukuze likhululwe, likwenze kube isikhathi eside ukulinda, ubungozi bokuthi iphakethe lakho lilahlekile noma licekelwe phansi. .. Futhi cabanga ukuthi uma kufanele wenze imali ebuyela emuva, nguwe okufanele uthwale izindleko zokuthumela zingahlukani kula mazwe ase-Asia ngokubaluleka kwenqaku, ezimeni eziningi angakunxepheki uma uthumela futhi ulahlekelwe yimali.
Nasi isibonelo salo mcimbi ukukopela komunye wabathengi bethu:
Izikhombisi ze-Laser ziqhathaniswa I-GreenFire - i-200mW Green Laser Pointer kaTorLaser ngamandla akhiphayo ku-532nm namanye ama-OEM laser pointer ane- "8000mW" ngombala oluhlaza.
Ukuqala ngeke kuze kube ngokoqobo lawa mandla ayi-8000mW, noma ukungeza okukhipha okuluhlaza okuluhlaza kukhishwe i-infrared ethe xaxa, okuyiqiniso okwenza kungabi nesihlungi se-IR.
Isikhombisi esithi "8000mW" sikhanya kakhulu, empeleni senzeka ngoba i-diode yakho ingu-20mW, okuphuma kuyo kuphela yi-5mW oluhlaza olucwengekile kanti enye kukhanya we-15mW.
Njengoba ubona kungumkhonyovu ophelele, futhi kwenzeka ngeshwa cishe njalo, ngakho-ke, kuzophinda futhi kuncome ukuthenga kusuka kumasayithi athembekile ngeziqinisekiso zekhwalithi, hhayi kuphela ngokulondolozwa okwenziwe ephaketheni lakho, kodwa ngoba ukungadlali umkhiqizo okhipha ngokuphelele ukukhanya okungabonakali futhi okuyingozi kakhulu: infrared (IR).
Amanani ethu uma esethwe kukhwalithi yangempela nensizakalo esiyinikelayo.
Sithumela njalo kusuka eSpain ngaphambi kosuku ngemuva kokuthola inkokhelo yakho, ngaphandle kokulinda isikhathi eside nokuhanjiswa amahora angama-24. Uzokwamukela ukuthengwa kwakho endlini yakho, ngaphandle kwenkokhiso noma inkinga eyengeziwe, kuyilokho okukufanele, ungahlali ngemali engaphansi.
Siyayazi imikhiqizo yethu uma sisebenzisa izithombe namavidiyo wangempela, okubonayo ukuthi yilokho okutholayo, hhayi lezimanga ezingemnandi!
Khumbula, eTorLaser thola kuphela imikhiqizo enezimpawu zangempela, ikhwalithi ephezulu futhi KWANGEMPELA, kuvame ukubiza kakhulu.
Uma udinga ulwazi olwengeziwe noma ufuna ukuzitholela thina ngokuchofoza umbuzo lapha.